Wararka: Trump oo ku talo jira safaaraddiisa inuu u raro Jerusalaam - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Trump oo ku talo jira inuu magaalada Jurusalaam u aqoonsado caasimadda Israa'iil. sawir: TT
Makaanka magaalada Jerusalaam (Qudus) oo la hadal hayo
La cusbooneeyay onsdag 6 december 2017 kl 12.31
La daabacay onsdag 6 december 2017 kl 10.10
Kor ayuu u sii kacayaa welwelka waddammada EU iyo Carabta ee la xiriira qorshaha madax-weynaha dalka Mareeykanka Donald Trump iyo inuu khudbad uu maanta oo arbaca ah jeedin doono kaga dhawaaqo makaanka magaalada Jerusalaam.
Sida uu sheegay war laga soo xigtay madax-weynaha Falstiin Maxmuud Cabbaas inuu madax-weyne Trump oo ey telefoon ku wada hadleen u sheegay inuu ku talo jiro safaaradda dalka Mareeykan ee waddanka Israa’iil inuu u rari doono magaalada Jerusalaam (Qudus).
Trump iyo Cabbaas oo telefoon ku wada hadley salaasadii shalay ayay hayadda wararka ee AFP oo cuskaneeysay xarunta madax-tooyada madax-weyne Cabbaas iyo inuu madax-weyne Trump u sheegay inuu ku talo jiro inuu safaaradda mareeykanku ku leeyahay dalka Israa’iil uu u raro magaalada Jerusalaam (Qudus).
Halka uu dhanka kale madax-weyne Cabbaas uga digay dhiggiisa ee dalka Mareeykanka caqabaddaha uga iman kara waanwaantii nabadeed ee carrigaa go’aan noocaasi, hadday noqon lahayd dhanka ammaanka ee Bariga Dhexe iyo caalamka guud ahaan.
War-bixinta ayaanay ku caddeeyn goorta uu maamulka Mareeykanku ku talo jiro inuu safaaradda uu ku leeyahay dalka Israa’iil uu ka rari doono magaalada Telaaviiv una rari doono magaalada Jerusalaam (Qudus).
Waa xaalad halis ah. Waxay dhalin kari doontaa saameeyn ballaaran iyo welwel xaqiiqdii.
Safaarad loo raro magaalada Jerusalaam (Qudus) iyo in magaaladaasi loo aqoonsado caasimadda dalka Israa’iil masiibooyin ballaaran ayey horseedi doonaan, sida ay sheegtay Margot Wallström (S), wasiirka arrimmaha dibadda Sweden mar ay ku sii wajahnayd kulan aan caadi ahayn oo magaalada Brugsel ku dhex mari doona EU iyo wasiirka arrimmaha dibadda Mareeykanka Rex Tillerson.
–Waa xaalada halis ah. Waxay horseedi doontaa saameeyn ballaaran iyo welwel. Waxaase iminka la hadal hayaa xalal kale sidii loogu heli lahaa, bal aan marka hore ka war-dhowrno hadalka la oran doono.
Wallström ayaa rajeeynaysa inuu wasiirka arrimmaha dibadda Mareeykanka Tillerson uu si cad uga hadlo siyaasadda dalkiisa.
–Annagu haddaannu nahay EU waxaannu mustaqbalka ku talo jirnaa in aannu maamullada Israa’iil iyo Falastiin casumaad ugu fidinno kullammada quraacda ee wasiirrada arrimmaha dibadda. Sidaa daraadeed ayay muhiim u tahay in la maqlo haddii ey jiraan wax ka bax-san ee aannu ka filan karno maamulka Mareeykanka ee Waashington.
Wallström ayaa sheegtay inuu Tillerson farta ugu fiiqay khudbadda madax-weyne Trump jeedin doono maanta oo arbaca ah, halkaasina loo baahan yahay in laga daalacdo siyaasadda Mareeykanka ee Bariga Dhexe. Sidoo kale madaxa siyaasadda arrimmaha dibadda ee EU-da Federica Mogherini ayaa dawladda Mareeykanka ugu baaqday siyaasad taxadar leh.
–EU waxay taageer-san tahay dib u soo nooleeyn macne ku fadhida ee waan-waantii nabadda ee dhabbadii xalka laba dawladood oo deris ah. Waxay noogu muuqataa in laga gaabsado dhammaan tallaabooyinka wax yeelen kara, sida ay shir jaraa’id oo gaaban ku sheegtay Mogherini kadib kulan gaar ah oo ay la yeelatay wasiirka arrimmaha dibadda Mareeykanka Tillerson.
Run ahaantii weli ma cadda talaabada ay dawladda Mareeykanku ku talo jirto. Waxaa un keliya ee laga soo wariyey inuu aqalka cad ee Mareeykanku sheegay in la fileyo go’aan uu Madax-weyne Trump dhowaan ka gaaro in safaaradda Mareeykanka ee Israa’iil loo raro Jerusalaam (Qudus) iyo in kale.
Mudane Trump! Jerusalaam waxay khad cas u tahay dadyoowga muslimiinta!
Is-bedel uu maamulka Mareeykanka siyaasaddiisa middaa la xiriirta ku sameeyaana waxay hor seedi doontaa ammaan-darro gobolka ku soo kororta.
–Mudane Trump! Jerusalaam (Qudus) waxay khad cas u tahay muslimiinta, sida uu ka digay Madax-weynaha Tayyip Erdogan, madax-weeynaha Turkiga oo khudbad toos looga daayay idaacadda la iska daawado uga jeedinayay xisbigiisa, sida ay qortay hayadda wararka ee AFP.
Fikirro kuwaa la mid ah waxey sidoo kale ka soo yeerayeen ururka jaamicadda Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga.
Dawladda Israa’iil ayaa u aragta in magaalada Jerusalaam (Qudus) ay tahay caasimadda dalkaasi, hase yeeshee ay badankood waddammada caalamku iyo dawladda Mareeykankuba ey safaarradahoodu ku sugan yihiin magaalada Telaaviiv.
Wasiirka difaaca Israa’iil Avigdor Lieberman ayaa sheegay in Madax-weyne Trump uu haysto ”suurtagal taariikhi ah”.
–Waxaan rajeeynayaa in safaarad mareeykan ah aan ku arko magaalada Jerusalaam (Qudus) toddobaadka foodda innagu soo haya, sida uu isniintii sheegay Lieberman, sida laga soo xigtay hayadda wararka ee magaceeda loo soo gaabiyo AFP.